Maraykanka: Kulanka Trump-Netanyahu iyo Safaaradda USA ee Jerusalem – Kasmo Newspaper
Maraykanka: Kulanka Trump-Netanyahu iyo Safaaradda USA ee Jerusalem
Updated - March 5, 2018 10:42 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, Ayaan meesha laga saarin in uu safar ku tagayo Israel, si uu uga qaybgalo xafladda furitaanka Safaaradda Maraykanka ee Jerusalem.
Sidaasna waxaa shaaca ka qaaday Trump qudhiisa, mar uu maanta Aqalka Cad ku qaabilay Ra’iisal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, oo booqasho 5 casho ah, kana nasinaysa culayska gudaha oo fadeexado, baaritaanno iyo doorashooyin hordhac ah oo suuragal ah, ka haystaan.
Xaalado siyaabo badan u shaabaha kuwa Trump oo isaga qudhiisa ku jira diiradda fadeexadda ‘Russiagate’ iyo qaar kale oo soo noqnoqday.
‘Haddii aan awoodi karo waan samaynayaa’ ayuu yiri Trump, isaga oo sii bixinaya jawaabtii uu siin lahaa Netanyahu oo Washington u soo gaaray in uu ku casuumo xafladda oo qorshaysan 14ka May.
Kiiska wadahadallada nabadda Israel iyo Falastiin ayaa, mar kale, maanta, ku soo laabtay in uu noqdo udub-dhexaadka kulanka , iyada oo goobta uu joogo, Jared Kushner, la-taliyaha qaba ina Trump, in kasta oo dhowaan laga mamnuucay galaangalkiisii arrimaha xasaasiga ah.
Qodobka 2aad ee kulul wuxuu nqoday xaalka Iiraan, oo 2da hoggaamiye doonayaan in ay meel qur ah uga soo wada jeestaan guud ahaan qalqaalada (Influence) Iiraan ee Bariga Dhexe, gaar ahaan Netanyahu oo jeclaan lahaa in Maraykanku kaga baxo heshiiskii Nuklearka.